Momba ny fidirana an-tsokosoko an'ny TPAN - The World March
Home » About us » Fifandraisana ofisialy » Momba ny fidirana an-keriny an'ny TPAN
Communiqué amin'ny alàlan'ny herin'ny Fifanarahana momba ny fandrarana ny fitaovam-piadiana niokleary (TPAN)
Communiqué amin'ny fidirana an-keriny amin'ny fifanarahana momba ny fandrarana ny fitaovam-piadiana niokleary (TPAN) sy ny faha-75 taonan'ny fanapaha-kevitra 1[I] an'ny filankevi-pilaminan'ny Firenena Mikambana
Miatrika ny "fiandohan'ny fanafoanana ny fitaovam-piadiana niokleary isika."
Tamin'ny 22 Janoary, ny Fifanarahana momba ny fandrarana ny fitaovam-piadiana niokleary (TPAN). Izy io dia mandrara manokana ny antokon'ny fanjakana amin'ny fampandrosoana, fitsapana, famokarana, famokarana, fahazoana, fananana, fanaparitahana, fampiasana na fandrahonana hampiasa fitaovam-piadiana niokleary ary hanampiana na hamporisihana izany asa izany. Hiezaka ny hanamafy ny lalàna iraisam-pirenena misy izay manery ny fanjakana rehetra tsy hitsapa, hampiasa na handrahona ny fampiasana fitaovam-piadiana niokleary.
Para Tontolo iainana tsy misy ady ary herisetra Antom-pankalazana io satria manomboka izao dia tena hisy fitaovana ara-dalàna eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena izay mamaritra ny hetaheta nandritra ny am-polony taona maro izay nanalokaloka olom-pirenena maro tamin'ny planeta tany amin'ny firenena maro.
Ny sasin-teny ho an'ny TPAN dia manasongadina ny risika ateraky ny fisian'ny fitaovam-piadiana niokleary sy ny voka-dratsin'ny asa maha-olombelona mahatsiravina vokatry ny fampiasan'izy ireo. Ny fanjakana nanaiky ny Fifanarahana sy ireo izay nanaiky dia nanasongadina izany loza izany ary naneho ny fahavononany taminà tontolo tsy misy fitaovam-piadiana niokleary.
Amin'ity fanombohana tsara sy mazoto ity dia tsy maintsy ampidirintsika ankehitriny fa ny fanjakana manao fanekena dia mamolavola sy mankato ny lalàna hampihatra ny fanahin'ny fifanarahana: ao anatin'izany ny fandrarana ny famindrana sy ny famatsiam-bola ny fitaovam-piadiana niokleary. Ny fandraràna ny famatsiam-bola fotsiny, ny fampitsaharana ny fampiasam-bola amin'ny indostria misy azy, no hanana lanjany avo lenta sy mandaitra, manan-danja lehibe amin'ny hazakaza-piadiana nokleary.
Efa voapetraka izao ny làlana ary antenaina fa ny isan'ny firenena manohana ny TPAN dia hitombo amin'ny tetika tsy azo sakanana. Ny fitaovam-piadiana niokleary dia tsy mariky ny fandrosoana ara-teknolojia sy ny fahefana intsony, ankehitriny dia mariky ny famoretana sy loza ho an'ny zanak'olombelona, ​​voalohany indrindra, ho an'ny olom-pirenenan'ireo firenena miaraka amin'ny fitaovam-piadiana niokleary. Satria ny fitaovam-piadiana niokleary "fahavalo" dia mikendry indrindra ireo tanàna lehibe amin'ireo firenena manana azy ireo, fa tsy amin'ireo izay tsy manana.
TPAN dia tratra vokatry ny fikatrohana ny fitaovam-piadiana nokleary nandritra ny XNUMX taona hatramin'ny nanombohan'ny baomba nokleary tao Hiroshima sy Nagasaki ny vokadratsin'izy ireo. Ireo vondron'olona, ​​fikambanana ary sehatra, miaraka amin'ny fanohanan'ny ben'ny tanàna, parlemantera ary governemanta no nahatsapa an'ity olana ity izay mbola nitolona nandritra ny taona maro ka hatramin'izao.
Nandritra izay taona maro izay dia nisy dingana lehibe noraisina toy ny: ny fifanarahana mandrara ny fitsapana nokleary, ny fihenan'ny isan'ny fitaovam-piadiana niokleary, ny fielezan'ny fitaovam-piadiana niokleary amin'ny ankapobeny ary ny fandrarana azy ireo any amin'ny firenena mihoatra ny 110 amin'ny alàlan'ny faritra tsy misy fitaovam-piadiana. nokleary (Fifanarahana amin'ny: Tlatelolco, Rarotonga, Bangkok, Pelindaba, Azia afovoany tsy misy fitaovam-piadiana, tsy misy nokleary-tsy fitaovam-piadiana Mongolia, Antarctic, OuterSpace ary Sea Bed).
Mandritra izany fotoana izany dia tsy nanakana ny hazakaza-piadiana nokleary ataon'ny hery lehibe izy io.
Ny teôria momba ny fisakanana dia tsy nahomby satria na dia nanakana ny fampiasana azy tamin'ny ady mitam-piadiana aza izy io, ny famantaranandron'ny apôkalyypa atomika (DoomsdayClock izay nifarimbon'ireo mpahay siansa sy ireo nahazo loka Nobel) dia manondro fa 100 segondra miala ny adin'ny atôma isika. Ny fihenan-tsasatra dia mitombo isan-taona fa ny fitaovam-piadiana niokleary dia hampiasaina tsy nahy, fiakaran'ny ady, tsy fikajiana na fikasana ratsy Azo atao io safidy io raha misy ny fitaovam-piadiana ary ao anatin'ny politika fiarovana.
Ireo fanjakana mitam-piadiana nokleary amin'ny farany dia tsy maintsy hanaiky ny adidiny hanatratra fitaovam-piadiana nokleary. Tamin'izany no nifanarahan'izy ireo tamin'ny fanapahan-kevitry ny Firenena Mikambana voalohany, ny fanapaha-kevitry ny fivoriamben'ny firenena mikambana, ny 24 janoary 1946, nifanarahana. Ary koa ao amin'ny Article VI an'ny Fifanarahana tsy famolavolana fifanolanana dia nanolo-tena hiasa amin'ny fitaovam-piadiana nokleary izy ireo amin'ny maha-antoko ao amin'ny Fanjakana. Ankoatr'izay, ny fanjakana rehetra dia fehezin'ny lalàna iraisam-pirenena mifototra amin'ny fanao sy ny fifanarahana izay mandrara ny fandrahonana na ny fampiasana fitaovam-piadiana niokleary, araka ny nohamafisin'ny Fitsarana Iraisampirenena momba ny Fitsarana tamin'ny taona 1996 sy ny Komitin'ny Firenena Mikambana momba ny zon'olombelona ao amin'ny 2018.
Ny fidiran'ny TPAN sy ny tsingerintaona faha-75 an'ny fanapahan-kevitry ny Security Council, roa andro taty aoriana, dia manome fotoana manararaotra hampahatsiahy ny fanjakana rehetra ny tsy ara-dalàna ny fandrahonana na ny fampiasana fitaovam-piadiana niokleary ary ny adidy amin'ny fitaovam-piadiana. nokleary, ary hisarika ny saina mifandraika ary hampihatra azy ireo eo noho eo.
Tamin'ny 23 Janoary, ny andro aorian'ny nidiran'ny herin'ny TPAN, ny mpiara-miasa MSGySV mpiara-miombon'antoka amin'ny fampielezana iraisam-pirenena ICAN dia hanao Cyberfestival kolotsaina para celebrar "Dingana lehibe ho an'ny zanak'olombelona”. Fitsidihana mandritra ny 4 ora mahery amin'ny alàlan'ny kaonseritra sasany, fanambarana, hetsika taloha sy ankehitriny, miaraka amin'ireo artista sy mpikatroka manohitra ny fitaovam-piadiana niokleary sy ho an'ny fandriampahalemana eto amin'izao tontolo izao.
Fotoana famaranana ny vanim-potoana fiadiana nokleary!
Ny hoavin'ny zanak'olombelona dia ho tanteraka raha tsy misy fitaovam-piadiana niokleary!
[I]Hatsangana ny komity mpiasan'ny tafika hanoro hevitra sy hanampy ny filankevitry ny fiarovana amin'ny raharaha rehetra mifandraika amin'ny filan'ny filan-kevitry ny filoham-pirenena amin'ny fitandroana ny fandriam-pahalemana sy ny filaminana iraisam-pirenena, ny asa sy ny baikon'ny hery napetraka eo am-pelatanany, amin'ny fanaraha-maso ny fitaovam-piadiana sy ny mety tsy fitaovam-piadiana.
Ekipa mpandrindra eran'izao tontolo izao tsy misy ady sy herisetra